मतदाताको खुट्टामा नोट चढाउदै भोट माग्ने मेलम्चीका कांग्रेस उम्मेदवारले खाेले मुख
May 2, 2022 N88LeaveaComment on मतदाताको खुट्टामा नोट चढाउदै भोट माग्ने मेलम्चीका कांग्रेस उम्मेदवारले खाेले मुख
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं १० का वडाअध्यक्षका उम्मेदवार अमृत खनालले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत पैसा बाँडेर भोट मागिरहेको खुलेको छ। कांग्रेसबाट वडाअध्यक्षका उम्मेदवार खनालले मतदाताको खुट्टामा एक हजार रुपैयाँ राख्दै ढोगेर भोट मागिरहेको खुलेको हो। खनाल चुनावी प्रचारप्रसारमा घरदैलो अभियानका क्रममा मतदाताको खुट्टामा एक हजार रुपैयाँ दाम चढाएर भोट मागिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। सामाजिक […]
चुनावकाे माहाेल तातिरहेका बेला किन आए राहुल गान्धी काठमाडौं !
May 2, 2022 N88LeaveaComment on चुनावकाे माहाेल तातिरहेका बेला किन आए राहुल गान्धी काठमाडौं !
काठमाडाैं । भारतीय कंग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धी काठमाडौं आएका छन्। उनी भिस्तारा एयरलाइन्सको विमानबाट अपराह्नमा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनी नागपोखरीस्थित होटल मेरियटमा बसेका छन्। उनको यो कार्यक्रम निजी भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी कंग्रेस आइका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। नेता गान्धीले ५ दिन नेपालमा बिताउने बताइएकाे छ । स्थानीय […]
काठमाडौं र पोखरामा मुसलधारे वर्षा, कस्तो रहनेछ आगामी तीन दिनको मौसम?
May 2, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौं र पोखरामा मुसलधारे वर्षा, कस्तो रहनेछ आगामी तीन दिनको मौसम?
काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती र गण्डकी प्रदेशमा अहिले वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार काठमाडौं, पोखरालगायत गण्डकी र बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ। स्थानीय वायु, भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बङ्गालको समथर भू-भागसम्म बनेको न्यून चापीय प्रणाली तथा पश्चिम वायुको प्रभाव रहेको मौसमविद् सलिना शाक्यले जानकारी दिइन्। लुम्बिनी […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस मंगलबारकाे राशिफल !
May 2, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस मंगलबारकाे राशिफल !
मंगलबार केही राशिका लागि चुनौतीपूर्ण रहनेछ। मंगलबार सिंह राशिका युवाहरूले राम्रो आर्थिक योजना बनाउनु पर्छ। अर्कोतर्फ तुला राशि भएका व्यापारीहरूले चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। हेर्नुस् दैनिक राशिफल मेष– यस राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो काम पूरा गर्न सहकर्मीको सहयोग लिनुपर्नेछ। सहकार्यमा काम सम्पन्न हुनेछन् । व्यापारीहरूले पैसाको सन्दर्भमा बुद्धिमानी निर्णय लिनु पर्छ, बिना सोचेर निर्णय गर्दा घाटा हुन […]
आयोगले सोध्यो स्थापितलाई स्पष्टीकरण
May 2, 2022 May 2, 2022 N88LeaveaComment on आयोगले सोध्यो स्थापितलाई स्पष्टीकरण
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी हालैको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यौन दुव्र्यवहारबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रश्नकर्ता स्वयंलाई अपशब्द प्रयोग गरेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको सन्दर्भमा स्थापितलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा […]
May 2, 2022 N88LeaveaComment on भाेलि सार्वजनिक बिदा
काठमाडाैं । सरकारले वैशाख २० गते मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नेपाल राजपत्रमा गत फागुन २६ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार इस्लाम धर्मावलम्वीको पर्व इद (इद उल फित्र)का दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था भएबमोजिम भोलि मङ्गलबार बिदा कायम भएको गृहमन्त्रालयद्वारा आज प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । स्थानीय तह नेतृत्वमा युवापुस्ताको आकर्षण “समाजको विकासका लागि युवापुस्ता आउनुपर्छ”, […]
आज पनि घट्यो सुन-चाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
May 2, 2022 N88LeaveaComment on आज पनि घट्यो सुन-चाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
काठमाडाैं । सोमबार सुन-चाँदी मूल्य घटेको छ। आज सुन प्रतितोला ९८ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने चाँदी प्रतितोला १२ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन सुन प्रतितोला ९९ हजार रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १३ सय रुपैयामा कारोबार भएको थियो। यस हिसाबमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला आठ सय रुपैयाँ र चाँदी दश […]